> Resource> Draịvụ> Olee naghachi Data si Nwụrụ Anwụ ike draịva
Gịnị bụ a nwụrụ anwụ ike mbanye?
Mgbe ị na-diski ike gị na-anaghị azaghachi ọzọ, eleghị anya ị na-anụ a ole na ole pathetic buzzing noises mgbe ị na-agbalị ka buut na mgbe ahụ ọ na-akwụsị na bụ keerughi. Dị otú ahụ ọnọdụ, diski ike gị mbanye wee ghọọ ndị nwụrụ anwụ.
Olee otú naghachi data nwụrụ anwụ ike mbanye
Ị nwere ike ịzụta a ọhụrụ diski ike iji dochie onye nwụrụ anwụ na-adị mfe, ma ị ga-atụfu ọdịnaya ruo mgbe ebighị ebi. Olee otú anyị pụrụ-alaghachi azụ faịlụ, fim, egwú, photos, ma ọ bụ ọbụna usoro ọrụ na-azoputa na ndị nwụrụ anwụ ike mbanye? Ka a okwu nke eziokwu, e nwere ụzọ na-arụ ọrụ ọma ịrụ nwụrụ anwụ ike mbanye data mgbake.
Get a bootable disk tupu ị na-eme ihe ọ bụla ọzọ, nke nwere ike inyere gị aka iji nweta gị na kọmputa mbụ. My nkwanye: Wondershare LiveBoot buut CD / USB, a dị ike na kọmputa bootable CD / USB mbanye na ike buut kọmputa gị n'okpuru ọnọdụ ọ bụla.
Nweta Liveboot CD / USB ebe a
Step1. Mepụta LiveBoot bootable CD / USB
Nzọụkwụ otu bụ ike a bootable CD ma ọ bụ USB, ka buut elu gị na kọmputa. Ị pụrụ ime ka a na ọzọ na kọmputa.
Mgbe igba egbe LiveBoot, ị ga-esi ọkachamara interface dị ka ndị na. Ga-esi gị kwadebere ide CD ma ọ bụ USB mbanye ịtinye na kọmputa, wee soro ọkachamara na ọkụ a bootable CD ma ọ bụ USB mbanye na otu Pịa.
Fanye bootable CD ma ọ bụ USB mbanye n'ime kọmputa onye ike mbanye bụ nke nwụrụ anwụ. Malite na kọmputa na pịa F12 mgbe kọmputa amalite amalite. Mgbe ahọrọ "onboard ma ọ bụ USB CD-ROM Drive" iji nweta a buut menu dị ka ndị na. Ebe a họrọ onye mbụ buut si LiveBoot, nke na-enye gị a dị ọcha ma dị mma usoro iji weghachite data site na gị onwe gị usoro.
Step3. Igosi data mgbake nwụrụ anwụ ike mbanye
Mgbe abanye usoro, ẹkedori LiveBoot ị ga-enweta na window n'okpuru, na nke ị nwere ike naghachi data gị nwụrụ anwụ ike mbanye.
# 1. Naghachi data nwụrụ anwụ ike mbanye
Ọ bụrụ na ị chọrọ naanị naghachi data dị ka akwụkwọ, music, photos, videos, wdg si gị nwụrụ anwụ diski ike, i nwere ike na-aga "Data Recovery" naghachi a niile ọdịnaya si gị nwụrụ anwụ ike mbanye na-azọpụta ha na ọzọ disk.
# 2. Naghachi sistemụ nwụrụ anwụ ike mbanye
Ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi ihe ọdịnaya, akpan sistemụ faịlụ na ndị nwụrụ anwụ ike mbanye, i kwesịrị na-aga "Disk Management", nke-enye gị ohere mmepụta oyiri dum ike mbanye ka ọhụrụ otu, ma ị nwere ike buut gị na kọmputa site na ọhụrụ ike mbanye na-enweghị nsogbu.